YEYINTNGE(CANADA): Saturday, May 14
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/14/20110အကြံပြုခြင်း
Burmese Language Instructor Position, Northern Illinois University
The Department of Foreign Languages and Literatures and the Center for Southeast Asian Studies seek an instructor of Burmese language beginning August 15, 2011 for one year. The successful candidate will teach lower and upper level Burmese language courses each semester.
Native or near-native fluency in Burmese; an M.A. degree or equivalent in an appropriate field; evidence of teaching experience. The ability to teachaproficiency-based curriculum isahighly desired.
ကနေဒါ အာရှ အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံး Final အဆင့်အရွေးခံ Hazel Aung
by Thida DVB
သူတောင်းစားညီလာခံ-၁ from Thida DVB on Vimeo.
၁၉၉၀ မတ်လ ၄ ရက်က ဇာဂနာ အရိုင်း ကင်းကောင် ဖိုးဖြူ ငှက်ပျောကြော် နဲ့ဂေါ်ဇီလာတို့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ပြဇာတ်တပုဒ်ပါ.. နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်ထိ ထိမိတဲ့ စကားလုံးတွေမို့နောက် အထူးသဖြင့် ထောင်ထဲမှာပေးဆပ်နေတဲ့ ကိုသူရ ခေါ် ဇာဂနာ အတွက် သတိတရ ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ပေးတာပါ..
14May 2011 yeyintnge's Diary.doc
14May 2011 yeyintnge's Diary.pdf
1157K View Download
14May 2011 Yeyintnge's Diary
လူသတ်သမားက သင်္ကန်းဝတ်တော့ သူ့ တရားက နာလို့ ကောင်းပါ့မလား
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ သူတို့ တွေကို စိတ်ကုန်သည့်အထဲမှာ တယောက်ထဲတော့ မဟုတ်။ ကုသမဂ္ဂက လာပြီ၊ တွေ့ ပြီ၊ ပြီးတော့ စစ်အစိုးရနှင့် တွေ့ ဆုံသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ သည်။ ပြီေးတော့ ဟိုနဲ့ တွေ့ဒီနဲ့ တွေ့ သည်။ ပြီးတော့ ၀မ်းသာကြောင်း ပြောမည်- တိုးတက်မူမြင်ကြောင်း ပြောမည်၊ နောက်တော့ ဘာမျှမထူး။ သံသရာကသာ ရှည်လာသည်။ ဒုံရင်းမှာ ဒုံရင်း။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရသည်မှာလည်း နည်းလမ်းပေါင်းများစွာ၊ ဘာမျှအရာမတင်။ ကြာတော့ စိတ်ပျက်စပြုလာကြပြီ။ ပို၍ဆိုးသည်မှာ ကုသမဂ္ဂမှ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ သော ပါတီိကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်း မရှိသည့် စစ်အစိုးရနှင့် ပြသနာကို ခ၀ါချထားသည်။ ပြီးတော့ ၂၀၁၀-ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ သော ပါတီကိုမူ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးတော့ သူတို့ တွေက မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို မိန့် ခွန်းပြောသလိုလုပ်ပါက ပြောင်းလဲလာမည်ဟု ပြောဆိုသွားသည်။ ဤစကားက နိုင်ငံရေးသမားစကားမဟုတ်။
မှန်ကန်သည့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ အစည်းတခု၏ ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားသင့်သည့် စကားမဟုတ်။ ၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ သော ပါတီကို အာဏာလွှဲပြောင်းမပေး၍ ၂၀၁၀-ခုနှစ်မှာ အာဏာသိမ်းခဲ့ သောအစိုးရ တရပ်ကသာ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေမည်ဆိုလျင် ယင်းစကားမှာ လွန်စွာမှ တန်ဖိုးရှိမည့် စကားဖြစ်သည်။ အာဏာသိမ်းကြားဖြတ်အစိုးရမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင် သဏ္ဍန်ဖေါ်ဆောင်ရန် ပြောလိုက်သည်နှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကပါမကျန် ၀န်းဝိုင်းကူညီ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သည်တော့ ယခုကြည့်ကြပါဦး။ သူတို့ က အာဏာသိမ်းကြားဖြတ်အစိုးရလည်း မဟုတ်။ နအဖအမွေကို ဆက်ခံသည့် ကြ့ဖွံ့ပါတီ။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာတောင်မှ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးနှင့်ပြိုင်ပြီး ခုတော့ သမတဖြစ်နေသော ဦးသိန်းစိန်ကို မည်သူတွေက ယုံယုံကြည်ကြည် ရှိနေကြပါသနည်း။ ယုံသောသူက သူ့ အတိုင်းအတာနှင့် ယုံနိုင်သည်ဆိုပေမဲ့မယုံသောသူတို့ က တော့ ရယ်လိုက်ရသည်မှာ ဖတ်ဖတ်မော။
ထို့ ကြောင့် ယခုအစိုးရကို မယုံသောသူအပေါင်းတို့ မှာ တပုံတခေါင်း။ အသိအမှတ်မပြုဟု ကြေညာခဲ့ သော သူတို့ မှာလည်း တပုံတခေါင်း။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွပ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ သော သူများ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွပ်မြောက်ခဲ့ပါက အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာမျက်ရည် ကျခဲ့ သောသူများမှာ လက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းကို မထိုးဖြစ်ကြဟု ပြောသံကြားနေရသည်။ သူတို့ က သမတဦးသိန်းစိန်ကို တောင်းပန်ခယပြီး စာရေးတောင်းဆိုခြင်းမှာ ယခုအစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့်လက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းကို မထိုးခြင်းဟု ပြောဆိုခြင်းမှာလည်း သဘာဝကျနေသည်။ အဓိကမှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အသိအမှတ် မပြုခြင်းက ပို၍ခရာကျနေသည်။ စင်စစ် ဦးသိန်းစိန်မှာ သမတသာဆိုသည် ။ သူ့ မှာအာဏာမည်မျှ ရှိသည်ဟု မပြောတတ်သော်လည်း သမတအုပ်ချုပ်သောစနစ်လား ၊ ၀န်ကြီးချုပ် အုပ်ချုပ်သောစနစ်လား၊ လွှတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ယူပြီး အုပ်ချုပ်သောစနစ်လား ဆိုသည်ကို မည်သူမျ မသိ။ တပါတီအာဏာရှင်စနစ်က ရုန်းမထွက်နိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားမှာ မည်သူကမျ တတ်အပ်သေချာ မပြောနိုင်မူက သေချာစွာ ရှိနေသည်။ ယင်းမှာလက်နက်ရှိသူက ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးစနစ် ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သည်တော့ မည်သူက လက်နက်အားကိုး ကိုင်စွဲနေသနည်း။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှာ လက်နက်အားကိုး ကိုင်စွဲမထားတော့ ဆိုလျင် မည်သူက အာဏာလက်ရှိဖြစ်မည်နည်း။ ကြည့်ရသည်မှာ ဦးသိန်းစိန်ပင်လျှင် တခုခုလုပ်မှားမည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေသည့် ပုံမျိုးမြင်နေရသည်။ ထို့ ကြောင့်လည်း သူ့ ဆီကို လိပ်မူပြီး စာရေးတောင်းခံနေသည်မှာ အချိန်တခုကို ပေးဆပ်နေခြင်းဟု ပြောဆိုသုံးသပ်နေမူများ ရှိနေသည်။ စာရေးတောင်းဆိုလို့ ကကော မည်သို့ထူးခြားနေမည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်နေကြသည်။ လူဦးရေ သန်းပေါင်း-၆၀ - လောက်နှင့် တွက်ချက်လျင် ထက်ဝက်ကျော် လက်မှတ်ထိုးမဲရပါက စကားပြောဆိုစရာ ရှိမည်ထင်သည်။ လွပ်လွပ်စွာထုတ်ခွင့် မရှိသရွေ့ပြည်သူတရပ်လုံး၏ ဆန္ဒအမှန်ကို ဖေါ်ပြနိုင်မူ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ယင်းအချက်က်ို အခွင့်ကောင်းယူကာ အရေခြုံအစိုးရက ပြန်လှန်ချေပမည်မှာ သေချာသည်။ အမှန်က လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုသည့် ကမ်ပိန်းကို လုပ်စရာမှာ တခုသာရှိသည်။ ယင်းကား ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အလိုမရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုသည့် ကမ်ပိန်းဖြစ်နေရန်သာလိုသည်။ ပြီးတော့ ယခုဦးသိန်းစိန်အပါဝင် အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို အကျဉ်းထောင်သို့ပို့ ထားရေး တောင်းဆိုသည့် ကမ်ပိန်းများကို လုပ်စရာသာရှိသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား-၂၀၀၀- ကျော်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပျက်စီးစုတ်ပြတ်အောင် ပြုလုပ်မည့်သူများဟု မည်သူမျှ မမြင်။ ထို့ ကြေင့်သူတို့ သာလွပ်ပြီး ယခုဦးသိန်းစိန်တို့ဝန်ကြီးတဖွဲ့ လုံးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် -၂၀၀၀- နီးပါးကို ထောင်ထဲထားလိုက်ပါက -အဟောဝတ -ကောင်းလေစွဟု သာဓုခေါ်ကြမည်မှာ ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှန်းဖြစ်မည်မှာ သေချာပါသည်။
တိကျစွာကျွန်တော် ပြောရဲသည်မှာ ယင်းအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမှာ အမှန်တကယ်လွပ်မြောက်လာခဲ့ ပါက ဤနိုင်ငံ မတိုးတက်ဘဲမနေဟု ယုံကြည်သည်။ တခုတော့ရှိသည်။ သူတို့ မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိနေရန်သာလိုသည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၀န်ကြီးနှင့် ယခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စိတ်ဆန္ဒလောက်တော့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်သည်။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ တွေကို ထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟု ယုံမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ သော် နိုင်ငံရေးအကျဉ်း လွပ်မြောက်ရေးလက်မှတ်ထိုး ကမ်ပိန်းကိုမူ ကျွန်တော်လည်း လက်မှတ်မထိုးဖြစ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အသိအမှတ်မပြုသော သူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ က ရှေ့ဆုံးက။ ထို့ ကြောင့် သူ့ ကို သမတကြီးခင်ဗျားဟု ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျှ နုတ်ကမပြောထွက်နိုင်။ ကျွန်တော်တောင်းဆို၍လည်း လွပ်လာမည်ဟု မထင်။ ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော့်ယုံကြည်ချက်အရ ကျွန်တော် လက်မှတ်မထိုးဖြစ်ချေ။ ကျွန်တော်လက်မှတ်မထိုးခြင်းကို ကျွန်တော်၏ ညီဖြစ်သူက နားလည်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဘူးသီးတောင်ထောင်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ညီမှာ နှစ်ရှာ်ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသည်။ သူ့ ကိုလွပ်စေချင်ပါသည်။ သို့ သော် လက်မှတ်ထိုးပြီး မတောင်းဆိုလို။ တကယ်တမ်း လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုရမည်ဆိုလျင် ဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် ၀န်ကြီးများကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ကျခံရေးအတွက်သာ လက်မှတ်ထိုးမည့် သူတွေထဲ ပါဝင်လိုပါသည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို ဖြုတ်ချရေးအတွက် လက်မှတ်ထိုးရမည်ဆိုလျင် ကျွန်တော်တို့ မှာ အင်တိုက်အား တိုက်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြောဆိုစည်းရုံးပေးမည် ဖြစ်သည်။ တရေးနိုး၍ ကြားဖြတ်စိုးရ ဖွဲ့ စည်းကြမည်ဟု ကြားလျှင် မှီရာနေရာမှ အားပေးထောက်ခံ မည်သာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ စစ်အစိုးရကို ပြောင်းလဲပြီး အရေခြုံအစိုးရ ပြုလုပ်သော သူတို့အုပ်စုမှာ လူသတ်သမားတွေ ဖြစ်သည်။ မုဒိမ်းကောင်တွေဖြစ်သည်။ သူတို့ က အရေခြုံပြီး မည်သို့ ပင် ဟန်ဆောင်နေပါစေ။ သူတို့ မှာ သွေးစွန်းသောလက်နှင့် ဆီမီးပူဇေါ် ဘုရားရေသပ္ပါယ်နေကြသည်ဟု သိထားကြသည် ။ သူတို့ ကိုမှ ကုလသမဂ္ဂက လာသောကိုယ်စားလှယ်တွေက ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် ရှိနေမည်ဆိုလျင် ကံဆိုးသောပြည်သူများဟု ပြောဆိုရုံမှတပါး အခြားမရှိတော့ ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘာဖန်လိုမြို့ မှ ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုမင်းနိုင်-ပဲခူးက ကံဆိုးသူပြည်သူများဟု သုံးနှုံးပြောဆိုခြင်းကို ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သူကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွပ်မြောက်ရေးအတွက် ကမ်ပိန်းမှာ လက်မှတ်မထိုးလိုက်ဟု ပြောသည်။ ထိုးသည့် သူများအား အပြစ်မမြင်ပါဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွပ်မြောက်စေချင်သည်ဟု ဆိုရှာပါသည်။ သူလည်း သမတဦးသိန်းစိန်ကို သမတကြီးခင်ဗျားလို့မပြောချင် ၊မဆက်ဆံချင်ဟု ဆိုသည်။
သေချာသည်မှာ အသိအမှတ်မပြုပါဟု ငယ်သံပါအောင် ပြောဆိုခဲ့ သောသူများမှာ အနမတ္တက ကျန်ရှိနေသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဓိကပြသနာမှာ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားပြိုကွဲပျက်စီးစေရေးဖြစ်သည်။ ပခုံးထက်မှာ အမာရွတ်တွေ ကိုယ်စီနှင့် ရှိနေသော သူတွေမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးကိုသာ လိုလားသည် ။ ယင်းကိုမှ အရေခြုံ သမတဦးသိန်းစိန်က ပြောင်းလဲ နိုင်လ်ိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်နေသည်ဆိုတော့ ပြောစရာ စကားကုန်လောက်ပြီထင်သည်။ စင်စစ်မှာ သူတို့ ကား လူသတ်သမား ဘ၀ကနေပြီး သင်္ကန်းစည်းထားသော ရဟန်းတုတွေလို ဖြစ်သည်။ မုဒိမ်းကျင့်ပြီး လူသတ်ကာ သင်္ကန်းအရေခြုံထားသော သူများဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့အရေခြုံသူများက ဆယ်ပါးသီလကို လာဟောပြောနေလို့ကတော့ မည်သူက သူတို့ တရားကို လက်ခံနာကြားမည်နည်း။ တိကျစွာပြောရလျှင် လူသတ်သမားက သင်္ကန်းဝတ်ပြီး တရားဟောလို့ ကတော့ သူ့ တရားက နာလို့ ကောင်းပါ့မလား ။။။။။။။။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/14/20113အကြံပြုခြင်း
Burmese Language Instructor Position, Northern Ill...
ကနေဒါ အာရှ အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံး Final အဆင့် ...
လူသတ်သမားက သင်္ကန်းဝတ်တော့ သူ့ တရားက နာလို့ ကောင်းပါ...